GetProspect: Mitadiava adiresy mailaka B2B ary tantano ny lisitr'ireo Prospect | Martech Zone
Zoma, Oktobra 2, 2020 Zoma, Oktobra 9, 2020 Douglas Karr
Na dia tsy tiako aza ny mandoka azy dia tokony hiaiky aho fa misy fotoana ahitan'ny olona ny adiresy mailaka ary nifandray tamiko tamina orinasa ara-dalàna. Raha ny marina dia nanakarama mpandraharaha vitsivitsy aho ary nividy sehatra vitsivitsy tamin'ireto mailaka nalefany tany ivelany nalefa tamiko ireto.
Izany dia nilaza, antenaiko ny fanajana hazavana amin'ireto fifandraisana ireto:
Research - Te hahafantatra aho fa nampiavaka ahy manokana ho an'ny tanjona manokana.
Personalization - Tiako hampahafantarin'ny olona ahy tsara hoe inona izany tanjona izany sy ny zavatra antenain'izy ireo.
Misafidy-avy - Te hanana fitaovana hialana amin'ny fangatahana aho ary tsy handray mailaka hafa mihitsy raha tsy azo ampiharina.
Taloha, izaho koa dia nanao ny (gazy) tsy azo eritreretina ary nividy lisitra mailaka betsaka. Orinasa tena tsy dia mateza izy ity, noho izany, avo lenta ny fahafahanao manimba ny lazanao sy manakatona ny mpivarotra mailakao. Raha manao izany ianao dia aleo mihodina amin'ny alàlan'ny fitaovam-pitsikilovana mailaka hiantohana fa tsy manafatra mailaka sy mailaka fandrika spam ianao.
GetProspect dia fanangonana azo karohina adiresy mailaka ampiarahana amin'ny motera fitsikilovana mitazona hatrany ny daty. Ampidiro fotsiny ny masonkarena fikarohana anao ary ny mpitrandraka ny mailaka dia hanome lisitr'ireo anarana misy mailaka orinasa, toerana, URL mombamomba ny LinkedIn, anaran'ny orinasa, indostria, tranokala ary maro hafa!
GetProspect dia manome interface tsara handefasana, hikarohana, hanivana, handamina ary hanondrana ny vinavinanao.
Endri-javatra momba ny fitantanana GetProspect Prospect dia misy:
Lists - Ataovy anaty lisitra ireo mombamomba anao nalaina. Baiko amin'ny anarana, orinasa, toerana sns.
Integrations - Manafatra na manondrana ny vinavinanao amin'ny rindranasa maherin'ny 750 ao anatin'izany ny Linkedin, Salesforce, Pipedrive, Zoho CRM, Mailchimp, Mailgun, ary G Suite.
Team - Azonao atao ny manasa ny ekipanao hizara ny drafitrao hahitanao ireo prospect haingana kokoa.
Export any Excel - Manondrana fifandraisana misy ifandraisany amin'ny rakitra XLS misy mailaka nalaina sy fampahalalana hafa.
Import Import - Mitadiava lisitry ny mailaka indray mandeha. Ampidiro fotsiny ireo rakitra misy anarana sy mombamomba ny orinasa ary tadiavo amin'ny ankapobeny ny mailaka.
Company Info - Mitadiava fampahalalana mahasoa toy ny tranokalan'ny orinasa, adiresy ara-batana sy nomeraon-telefaona, haben'ny orinasa, isan'ny mpiasa ary maro hafa.
Misoratra anarana ary mahazo adiresy mailaka 200 maimaim-poana
Fampahafantarana: Mampiasa ny rohy mpampifandray ahy aho GetProspect - ampiasao ny kaody 6rE12 hahafahanao mahazo adiresy mailaka prospect 200!
Tags: b2bmitadiava adiresy mailakamitadiava adiresy mailakamahazo adiresy mailaka avy amin'i linkingetprospectgsuiteLinkedInsalesforce